Global Voices teny Malagasy · 15 Janoary 2019
Tantara tamin'ny 15 Janoary 2019
Ny fanarahamaso niomerika ao Angôla sy ireo firenena hafa afrikàna “tsy dia manao ahoana loatra”
Angola15 Janoary 2019
Toa lasa nitafy fahalinana goavana ho an'ireo mpikaroka ny fahitàna any amin'ireo firenena lehibe ao Afrika ireny rindrambaiko ratsy fanahy sy teknolojia hafa "mora vidy" natao ho fanarahamaso ireny. Saingy ahoana ny amin'ireo firenena izay, raha jerena amin'ny fihevitr'ireo tandrefana, dia heverina ho "tsy dia manao ahoana loatra"?
Rosia: Bilaogera ao Kemerovo iray hafa notoriana noho ny fanalam-baraka
Rosia15 Janoary 2019
Nanomboka ny raharaha heloka bevava nanenjehana an'i Alexander Sorokin monina ao Kemerovo (aka mpisera LJ commentator40), hoy ny tatitra [RUS] avy amin'ny Echo Moskvy. Voampanga ho nanala baraka ny governoran'i Kemerovo, Aman Tuleev [EN] tamin'ny lahatsoratra [RUS] izay nampitaha ny governoram-paritra Rosiana tamin'ireo mpanao didy jadona Amerikana Latina i Sorokin.
Rosia: Tranonkala nakatona noho ny baikon'ny polisy
20marta.ru, tranonkalan'ny mpanohitra natokana hitantarana momba ny “Andron'ny Fahatezerana” natao tamin'ny 20 Martsa no nakaton'ny polisy iray andro monja taorian'ny nisokafany, araka ny notaterin'ny kasparov.ru.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana15 Janoary 2019
Zambia: Rahonan'ny zanakalahin'ny filoha ny mpanao gazety, “Matinay ialahy”
Zambia15 Janoary 2019
Sady voadaroka no norahonan'i Kazim Sata zanakalahin'ny filoha, dia mbola hiatrika fitsaràna noho ny raharaha lazaina fa mampifamatotra azy amin'ny tranonkala Zambian Watchdog i Thomas Zgambo, mpanao gazety tsy miankina. [...] tokony ho tsaroany fa ho avy ny fotoana izay tsy hananany mpiambina manokana intsony...
Azia Atsinanana15 Janoary 2019
Nosakanan'i Bahrain ireo tranonkala manakiana ny governemanta
Bahrain15 Janoary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) “Nanao fanentanana manohitra ireo tranonkala miaro ny zon'olombelona sy ara-politika, izay mitsikera ny politikan'ny governemanta ny manampahefana Bahrainita”, araka ny tatitra nataon'ny Fiarahamonin'ny Tanora ao Bahrain ho an'ny Zon'Olombelona izay nanome ny lisitr'ireo vohikala voasakana, ireto avy izany : Foibe...
Shina15 Janoary 2019
Tiorkia15 Janoary 2019